भोजराज कार्की, असार १९
सोलुखुम्बु ः यहाँको तेन्जिङ हिलारी विमान स्थल लुक्लामा चार दिन देखी एउटा बिमान थन्किएर बसेको छ । मौसम प्रतिकुलताको कारण तारा एयरको बिमान लुक्ला बिमानस्थलमै थन्किएर बसेको हो ।
नाईनएनएकेके कल साइन भएको उक्त विमान अझै केहि दिन लुक्लाबाट काठमान्डौ जानसक्ने सम्भावना नदेखिएको तारा एयर लुक्लाका इन्चार्ज फुनुरु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
शुक्रबार मौसम प्रतिकुलताको बाबजुदनै यहाँ अवतरण गरिएका २ वटा विमानमध्ये समिट एयरको विमान यात्रु लिएर तत्काल फर्कन सफल भए पनि तारा एयरको विमान भने फर्किन नसकेको तारा एयर लुक्लाले जनाएको छ । बिमान कम्पनीको नियम अनुसार ४८ घण्टा बढी सोही बिमानस्थलमा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राविधिकले निरिक्षण गरेपछि मात्र उडान गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम अनुसार अब लुक्लामा प्राविधिक आएर बिमानको अवस्था बारे निरिक्षण गरेपछि मात्र उक्त बिमानले उडान गर्ने बताईएको छ ।
अहिले जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु लागेको छ ।
हुस्सुको कारण जिल्लाको अर्को बिमानस्थल फाप्लुमा समेत कुनै उडान हुनसकेको छैन । यहाँ हेलिक्पटरले समेत उडान भर्नसक्ने अवस्था नरहेको फाप्लु बिमानस्थलले जनाएको छ ।
हेलिकप्टरले समेत उडान भर्ननसक्दा आकस्मिक बिरामीलाई काठमान्डौ लैजान समस्या भएको सोलुहेल्थकेयर सेन्टर सल्लेरीका निर्देशक डा. राजेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । बस्नेतले भन्नुभयो, “आईसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी छन्, तर लैजान सकेका छैनन्,् मान्छेको ज्यान बचाउन मस्किल प¥यो ।” डा. बस्नेतले भन्नुभयो, “अक्सिजनबाट छुटायो भने एक घण्टा भन्दा बढी बचाउन सक्ने अवस्था छैन, गाडी बाट लानसक्ने स्थीती हुनेकुरै भएन, मौसम प्रतिकुलताको कारण हेलिकप्टर समेत आउन सकेन ।”
गत असार १५ गते जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ११ तिङ्लामा जिप दुर्घट्नामा ज्यान गुमाएका दुई जना कर्मचारीको शबलाई हेलिकप्टर मार्फत गृह जिल्ला लाने तयारी गरेपनि सफल हुन सकेन । दुई दिन सम्म हेलिकप्टरको पर्खाइमा बसेपनि सफल नभएपछि जिप मार्फतनै लगिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुक्ति शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
लुक्ला विमानस्थलमा उडान हुन नसक्दा पर्यटकहरु अलपत्र परेको तारा एयर लुक्लाका स्टेसन इन्चार्ज फुनुरु शेर्पाले बताउँनुभयो । शेर्पाले भन्नुभयो, “यतिनै यात्रु छन् भन्ने एक्किन तथ्याङ्क छैन, केहि यात्रुहरु पैदल यात्रा पछि सदरमुकाम सल्लेरीबाट जिप मार्फत गएको बुझिएको छ भने केहि यात्रु एक घण्टाको पैदल यात्रा पछि तल सुर्के पुगेर हेलिकप्टर मार्फत गईरहेका छन् ।” देशै भरि भईरहेको बर्षातको प्रभाव सोलुखुम्बुमा पनि परेको छ । यद्यपि कुनैपनि अप्रिय घट्ना भने नघटेको सोलुखुम्बु प्रशासनले जनाएको छ ।